News - သံမဏိသံချေးသည်အဘယ်ကြောင့်နည်း
လေထုအောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ပြုခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပြီးအက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီနှင့်ဆားများပါ ၀ င်သောမီဒီယာများတွင်လည်းချေးကိုခုခံနိုင်သည်။
သံမဏိသံချေးမလား ပထမတစ်ချက်မှာမှားယွင်းသောအဆိုပြုချက်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ။ ။သို့သော်သံမဏိသံချေးသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကဲ့သို့ဘဝ၌များပြားစွာ!
လေထဲတွင်တွေ့ရသောသံသည်အောက်ဆီဂျင်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုဓာတုဗေဒဖြင့်ဓာတ်ပြုပြီးအမျိုးမျိုးသောသံအောက်ဆိုဒ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါတိကျတဲ့သရုပ် "သံချေး" ပါ!
1. သုတ်သောအမှုန့် 2. စက်မှုအဝတ်အစား 3. ရေ
သံမဏိ၏မျက်နှာပြင်အားအလွန်ပါးလွှာ။ ခိုင်မာပြီးသိပ်သည်း။ တည်ငြိမ်သောခရိုမီယမ်ကြွယ်ဝသောအောက်ဆိုဒ်ရုပ်ရှင် (အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်) အဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန် chrysanthemum နှင့်နီကယ်ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ချေးကိုတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းကိုရရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၃၀၄ သံမဏိပိုက်သည်ခြောက်သွေ့။ သန့်ရှင်းသောလေထုထဲတွင်အလွန်ကောင်းသည့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ၎င်းသည်ဆားများစွာပါသည့်ပင်လယ်မြူအတွင်းလျင်မြန်စွာသံချေးထွက်သွားနိုင်သည်။ 316 သံမဏိပိုက်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။
ဖွဲ့စည်းမှုအရ၎င်းကို Cr series (SUS400)၊ Cr-Ni စီးရီး (SUS300), Cr-Mn-Ni (SUS200) နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုခိုင်မာသည့်အပိုင်း (SUS600) အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
သံမဏိ 200 စီးရီး - ခရိုမီယမ် - နီကယ် - မန်းဂနိစ် austenitic ။
300 စီးရီး - ခရိုမီယမ် - နီကယ် austenitic သံမဏိ။
301 — ပုံသွင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုကောင်းမွန်သောပြွန်။ စက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်မာကျောနိုင်သည်။ ကောင်းသောဂဟေ။ ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောအစွမ်းသည်သံမဏိ ၃၀၄ ထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
302 —The ချေးခံနိုင်မှုသည် 304 နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၊ အတော်လေးမြင့်မားသောကာဗွန်ပါဝင်မှုကြောင့်ခွန်အားသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
၃၀၃ - အနည်းငယ်သောဆာလဖာနှင့်ဖော့စဖောရက်ကိုပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ၃၀၄ ထက်လျှော့ရန်လွယ်သည်။
304 - အမည်ရ 18/8 သံမဏိ။ GB တန်းသည် 0Cr18Ni9 ဖြစ်သည်။
၃၀၉ နှင့် ၃၀၄ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၃၁၄ - ၃၀၄ ပြီးနောက်ဒုတိယအများဆုံးအသုံးပြုသောသံမဏိတန်းကိုအဓိကအားဖြင့်အစားအစာလုပ်ငန်းနှင့်ခွဲစိတ်စက်များတွင်အသုံးပြုသည်။ အထူးအချစားခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုရရှိရန် molybdenum ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် ၃၀၄ ထက်ကလိုရိုက်ဒြပ်စင်ကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကို "သင်္ဘောသံမဏိ" အဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။ SS316 ကိုများသောအားဖြင့်နျူကလီးယားလောင်စာပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာများတွင်အသုံးပြုသည်။ 18/10 တန်းသံမဏိများသောအားဖြင့်လည်းဤလျှောက်လွှာအဆင့်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၃၂၁ - တိုက်ဂျက်ပစ္စည်းများချေးခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်တိုက်တေနီယမ်ထပ်ထည့်ခြင်းမှအပအခြားဂုဏ်သတ္တိများသည် ၃၀၄ နှင့်ဆင်တူသည်။
400 စီးရီး - ferritic နှင့် martensitic သံမဏိ။
408 - ကောင်းမွန်သောအပူခုခံမှု၊ အားနည်းသောချေးနိုင်မှု၊ ၁၁% Cr၊ 8% Ni ။
409 - အများအားဖြင့်ကားတစ်စီးအိပ်ဇောပိုက်အဖြစ်အသုံးပြုသောဗြိတိသျှနှင့်အမေရိကန်တို့တွင်စျေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ်မှာသံထည် (chrome steel) ဖြစ်သည်။
၄10 - Martensite (စွမ်းအားမြင့်ခရိုမီယမ်သံမဏိ)၊ ကောင်းမွန်သော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်ယိုယွင်းမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၄၁၆ - ဆာလ်ဖာကိုပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
420— Brinell မြင့်ခရိုမီယမ်သံမဏိကဲ့သို့သောအစောဆုံးသံမဏိနှင့်ဆင်တူသော“ ဖြတ်တောက်ခြင်း tool grade” martensitic သံမဏိ။ ၎င်းသည်အလွန်တောက်ပသောခွဲစိတ်ဓားများအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။
၄၃၀ —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ သို့သော်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်အားနည်းခြင်း၊
၄၄၀ - စွမ်းအင်မြင့်ဖြတ်တောက်နိုင်သောသံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်ကာဗွန်ပါဝင်မှုအနည်းငယ်မြင့်မားသည်။ သင့်လျော်သောအပူကုသမှုပြီးနောက်အထွက်နှုန်းအားပိုမိုမြင့်မားစွာရရှိနိုင်ပြီးမာကျောမှုသည်အခက်ခဲဆုံးသံမဏိများအနက်မှ ၅၈HRC သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ *** အသုံးများသော application တစ်ခုမှာ "razor blades" ဖြစ်သည်။ အသုံးများသောမော်ဒယ်သုံးမျိုးရှိသည်။ ၄၄၀A၊ 440B, 440C နှင့် 440F (လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစား) ။
500 စီးရီး - အပူဒဏ်ခံခရိုမီယမ်အလွိုင်းသံမဏိ။
သံမဏိခိုင်မာစေသည့် Martensitic မိုးရွာသွန်းမှု 600 စီးရီး။
630 - *** သံမဏိပုံစံများကိုအသုံးပြုလေ့မိုးရွာသွန်းမှုကိုများသောအားဖြင့် 17-4 ဟုလည်းခေါ်သည်; 17% Cr, 4% နီ။
post အချိန်: ဒီဇင်ဘာလ -8-2020
Ss304 သံမဏိဘောလုံး, 3mm ကြေးဝါဘောလုံး, အစိုင်အခဲကြေးနီဘောလုံး, ကြေးဝါဘောလုံး, 3mm Copper Ball, အစိုင်အခဲသောကြေးဝါဘောလုံး,